Wasiir Juxaa oo xil ka qaadis sameeyay iyo buuq ka dhashay xilka qaadistaas – Idil News
Wasiir Juxaa oo xil ka qaadis sameeyay iyo buuq ka dhashay xilka qaadistaas
Wareegto maanta oo sabti ah kasoo baxday Wasiirka Arimaha gudaha iyo Dib u heshiisiinta Xukuumada Soomaaliya ayaa shaqo ka joojin waxaa lagu sameeyay Xoghayihii joogtada ee Wasaarada Arimaha gudaha Yahye Cali Ibraahim Hereri.
Warqad soo baxday maanta 22 July, 2017 ayaa lagu sheegay in Yahye uu u hogaansami waayay amarrada madaxda sare islamarkaana uu curyaamin ku wada hannaanka shaqo ee wasaaradda.
Wareegtadan ayaa sidoo kale lagu magacaabay Xoghayaha Joogtada ee Wasaarada Arimaha gudaha , waxaana loo magacaabay Mudane Cabdulaahi Maxamuus Xasan Azhari, waxaana wareegtadan shaqo ka joojinta ah iyo magacaabista lala socod siiyay Ra’isul Wasaare Kheyre.
Wareegta magacabida xoghayaha KMG ah:-
Dhanka kale warqada ka soo baxday Xaafiiska Wasiiru dowlaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha C/llaahi Faarax Wehliye ayaa lagu tilmaamay in ay sharci darro tahay shaqo joojinta iyo magacaabista Xoghayaha Joogtada KMG ee Wasaaradda.
Wasiiru dowlaha ayaa difaacay Xoghayihii joogtada Yaxye Cali Ibraahim, isagoo xusay in eedeyntii ku qorneyd warqadii shaqo joojinta ay aheyd mid aan waafaqsaneyn xaqiiqda, sidaas darteedna loo baahnaa in ay noqoto Canaan qoran iyo mid Af ah.
Sidoo kale waxaa isgauna taageero u muujiyay Xoghayah xilka laga qaaday Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Cali Sheekh Maxamed Nuur ,waxuuna si cad uga soo horjeestay xil ka qaadista uu sameeyay Wasiirka Arrimaha Gudaha Mr Juxa, isagoo ku tilmaamay inay tahay mid sharci darro ah oo aan waafaqsaneyn dastuurka.
Halkan ka akhriso wareegta wasiir ku xigeenka:-
Isku soo wada duuboo waxaa muuqata in Wasiir Juxaa garabka lagaliyay isla markaana isbahaysi isaga kasoo horjeedaa Wasaarada ka dhex dilaacay ,sidoo kale waxaa warar hoose sheegayaan in Ra’isalwasaare Khayre ka carooday xilka qaadista Xoghayaha Joogtada ah ee uu smaeeyay wasiir juxaa.
Xoghayaha Joogtada ah ee xilka laga qaaday ayaa u dhashay beesha Ra’isalwasaare Khayre waxaana jiray mudooyinkan danbe khilaaf xoog leh oo ka dhex taagnaa Wasiirka iyo Xoghayaha Joogtada ah.